စိတ်ကူးတေးသီ: အရက်နဲ့လူ ဘယ်သူမှားသလဲ
မနေ့ကဘီဘီစီမှာ အရက်အကြောင်းဆွေးနွေးခန်းလေးနားထောင်လိုက်ရတယ်။ အရက်မကောင်းကြောင်းပြောချင်တာလား။ အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ချဉ်းကပ်စေချင်တာလား။ အရက်ကိုအကျယ်ဖွင့်ချင်တာလား။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကမကွဲတော့ သူတို့ဆွေးနွေးခန်းကလည်း သိပ်လှုပ်မလာဘူးလို့ထင်တယ်။ အခုရေဒီယိုသမားတွေက လူတွေကို ဖုန်းထိုးပြီးလျောက်မေးတယ်။ အီးမေးလ်ကနေ စာတွေ၊ စကားတွေခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါတွေစုပြီး တင်ပြချက်လေးလုပ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစုဆောင်းတာ၊ လေ့လာသုံးသပ်တာတွေက မပါသလောက်ပဲ။ မီဒီယာအပေါ် ကိုယ်ကပဲနားလည်မှုလွဲတာလား မပြောတတ်ဘူးလေ။
ပြောချင်တာက အရက်အကြောင်းပါ။ သူတို့ဆီတက်မပြောဖြစ်လို့ ကိုယ်ဘလော့မှာပဲ ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးတင်လိုက်တော့တယ်။ ပြောရရင်အရက်နဲ့ကိုယ်နဲ့က အရင်းကြီးတွေ။ အဖေကအရက်ဆိုင်မန်နေဂျာ။ မဆလခေတ်ကတော့ ရေကပိုက်ဆံရတဲ့သူဆိုပါတော့။ ကိုယ်ကလည်း ငယ်ကတည်းက ပုလင်းကျန်စစ်ပြီး မုန့်ဘိုးရှာလာခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် အဖေကအရက်ကြိုက်တတ်သူတော့မဟုတ်ဘူး။ အဖေကအသားဖြူတော့ အရက်သောက်ပြီးရင် တကိုယ်လုံးနီတက်လာတာ။ အရက်မူးမှ ရှာဖြစ်တဲ့အပျော်မျိုးတော့ အဖေကကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ကလည်းအဖေတူပဲ။ ကိုယ့်ဘ၀မှာ အရက်ကိုအတော်သောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေရှိခဲ့တယ်။ အတော်သောက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း တကယ့်အရင်းတွေကိုး။ အခုတော့ အရက်သောက်ဖို့ရာ အဆင်မပြေတဲ့နေရာကိုရောက်နေတော့ အရက်ကပြတ်နေပြန်ရော။ ဆေးစစ်တော့ ကိုယ့်အသဲကကြီးနေတယ် ယူဆရလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် အရက်မသောက်ပါနဲ့တဲ့။ သောက်ချင်စိတ်ကလည်းမရှိပါဘူး။ ဒီမှာက အရက်ဈေးကြီးတယ်။ သောက်ဖေါ်သောက်ဖက်တွေမရှိဘူး။ မူးရင်လည်း ဟိုသွားဒီသွားလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ဈေးကြီးလည်း အရက်ကိုကြိုက်တတ်သူဆိုရင်တော့ သောက်ဖြစ်မှာပါ။ တကယ်က ကိုယ်ကအဖေ့လိုပဲ အရက်ကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။
အရက်သမားအမှားတထောင်တဲ့။ လူကိုဖျက်အရက်တဲ့။ ဘုရားလက်ထက်ကတည်းကမှန်ခဲ့တဲ့ အမှန်တရားပဲ။ အရက်ကတော့ ဘုရားမပေါ်ခင်ကတည်းက ပေါ်ခဲ့တာ။ သာသနာနှစ် ၂၅၀၀ ကျော်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အရက်ကခေတ်စားနေတုန်းပဲ။
အရက်သောက်ပြီးမှ မှားရဲတဲ့သူတွေကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်။ ခင်ဗျားတို့က အရက်ကိုနာမည်ဖျက်နေတဲ့သူတွေပဲလို့။ ငယ်ငယ်က ပန်းဆိုးတန်းကုန်တိုက်ပေါ်မှာ အရက်ရောင်းတဲ့ကောင်တာနောက်က စာချိုးလေးတခုကို သဘောကျခဲ့ဘူးတယ်။ လူကိုဖျက် အရက်ဟုဆိုသော်လည်း၊ သူဖျက်တိုင်းသာ ပျက်ရပါမူ၊ ဘယ်မှာလူကောင်းရှိမည်နည်း တဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတွေးအခေါ်အသစ်တွေထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ ယုံကြည်နေတုန်းက သူငယ်ချင်းတချို.ကို အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခပ်တည်တည်ပြောခဲ့ဘူးတာ တခုရှိတယ်။ ကိုယ်တို့ယောကျာင်္းတွေဟာ အရက်နဲ့ပတ်သက်ရင် အစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ရမယ်။ တခုက အရက်ကို မသောက်ရမနေနိုင် စွဲစွဲလန်းလန်းနဲ့ အရက်ရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်တဲ့အထိ သောက်တာ။ နောက်တခုက အရက်ကိုမကောင်းမှုတခုလို ဝေယျာမဏိ ဝေးဝေးကရှောင်ကျဉ်ပါ၏လုပ်တာ လို့။ တကယ်က အရက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးတန်ဆာပလာတခုလို နိုင်နိုင်နင်းနင်းအသုံးချသောက်သုံးနိုင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လည်း လူမသိသူမသိတဲ့အထိမူးသွားလို့ ရေချိုးခန်းထဲ လှဲအိပ်ခဲ့ဘူးတာတွေ ရှိခဲ့ဘူးတာပါပဲ။
သိပ်ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ မူးသွားရင် သူဘာမှမသိတော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ တကယ်လည်း သူမူးသွားရင် သူမလုပ်ရဲတဲ့အမှား ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ အကုန်လုပ်ရဲပါတယ်။ လုပ်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းသိသူမို့ ဘာမှစောဒကမတက်ခဲ့ဘူးပေမယ့် မူးလို့မသိဘူးဆိုတာဟုတ်မလားဟယ်။ ချီးကျွေးကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ အဖွားစကားကို သတိရပြီး ပြုံးခဲ့မိတယ်။
ဒီစာကိုမရေးခင် ဂျီးနပ်စ်တဘူး ဒီနေ့သောက်ဖြစ်တယ်။ တဘူးထဲဆိုတော့ အီလည်လည်ပေါ့လေ။ အခုအရက်အကြောင်းရေးတော့လည်း အီလည်လည်ဖြစ်နေပြန်ရော။
တခုတော့ သေချာတာပြောမယ်။ အီလည်လည်ဖြစ်ရုံလောက်တော့ အရက်ကိုမသောက်ကြလေနဲ့။ သိပ်နှမြောဖို့ကောင်းတယ်။ အရမ်းမူးပြီးလည်း တခါတည်းမှောက်မသွားစေနဲ့။ သိပ်နှမြောဖို့ကောင်းတယ်။
Posted by wai lin Tun at 12:24 AM Labels: အတွေးမှတ်စု
အစွန်း ၂ဘက်နဲ့ လူကိုဖျက် အရက်ဟုဆိုသော်လည်း၊ သူဖျက်တိုင်းသာ ပျက်ရပါမူ၊ ဘယ်မှာလူကောင်းရှိမည်နည်း တဲ့ ဆိုတာတွေ ဖတ်ပြီး ကြိုက်လွန်းလို့ ပြုံးလိုက်မိတယ် ။
ကိုဝေလင်းဘလော့ကို အေးအေးဆေးဆေး အစအဆုံး ပြန်ဖတ်ရင်းနဲ. ရင်ထဲမှာ ကလိကလိဖြစ်လာလို. ရေးမိတာပါဗျာ့၊ မကောင်းတဲ့အရက်တွေကို မသောက်နဲ.ဗျာ။ ကောင်းတဲ့အရက်တွေကိုပဲ သောက်၊